ShweMinThar: သင်္ချာအပြင်ဘက်က တန်ဖိုး
သင်္ချာအပြင်ဘက်က တန်ဖိုး - #ထက်မြတ်နိုင်ဇင်
ကျွန်မက Burberry တံဆိပ် အင်္ကျီလေးကို ကိုင်ကြည့်မလိုလုပ်ပြီးမှ ပြန်ချထားလိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အင်္ကျီရဲ့တန်ဖိုးက နည်းမှမနည်းတာကိုး။ တစ်ထည်ကို တစ်သိန်းနှစ်သောင်းတဲ့၊ များလိုက်တဲ့ဈေး။ အဲဒီလောက် အင်္ကျီကိုတော့ ဈေးကြီးပေးပြီး မ၀ယ်ချင်ဘူး။
ကျွန်မက အရင်ကတည်းက အ၀တ်အစားဆို တန်ဖိုးကြီးတွေကို ဘယ်တော့မှ ၀ယ်မ၀တ်ဘူး။ လှတာဆို အကုန်ဝတ်တယ်။ လှရင်ပြီးရောလို့ သဘောထားခဲ့တယ်။ အမေကဆို -
“သမီးရယ်…ဘာလို့ဈေးပေါတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ဝတ်နေရတာလဲ။ မ၀ယ်နိုင်တာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ အလကား အပေါစားတွေ။ အပေါစားမှန်း သိပ်သိသာတာပဲ” လို့ အမြဲပြောတတ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကတော့ နှစ်သောင်းအထက်ဆို ဘာအ၀တ်အစားကိုမှ မ၀တ်ချင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မချစ်သူကလည်း မေမေ့သဘောနဲ့ တစ်ထပ်တည်းပဲ။ ကိုက ဈေးကြီးပေးပြီး တန်ဖိုးကြီး Brand ကိုမှ ကြိုက်တတ်သူ။ ဂျင်းဘောင်းဘီဆို 501 မှ၊ အင်္ကျီတံဆိပ်ဆို Burberry မှ၊ ရေမွှေးဆိုလည်း သိန်းကျော်တန် HUGO မှ ၀ယ်ဆွတ်ချင်သူ။ ကျွန်မနဲ့တော့ လုံးဝကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
တစ်ခါက ကိုနဲ့ ကျွန်မ Shopping Mall တစ်ခုထဲရောက်တော့ ကိုက သိန်းကျော်တန်တံဆိပ်နဲ့ အင်္ကျီတွေကို ရွေးနေချိန်မှာ ကျွန်မကတော့ လှလည်းလှတဲ့ ဈေးလည်းသက်သာတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ရွေးနေတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုက
“ခိုင်ကလည်း အဲဒီအင်္ကျီတွေ ဘာလုပ်ဖို့လည်း။ ဒီမှာ Brand တွေ လာကြည့်စမ်းပါ”
“ကိုကလည်း Brand မဟုတ်လည်း ဘာဖြစ်လဲ။ ဒါလေးတွေလည်း လှပါတယ်”
“လှရုံနဲ့ ပြီးမလား ခိုင်ရဲ့။ လှလှ မလှလှ လူတွေက အင်္ကျီတံဆိပ်နဲ့ တန်ဖိုးကို ကြည့်ပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ဆုံးဖြတ်ကြတာ”
ကျွန်မလည်း ကို့အပြောကို ပြန်မပြောနားမထောင် လုပ်နေတော့ ကိုက ဘာမှဆက်မပြောဘဲ ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့ သူရွေးစရာရှိတာ ဆက်ရွေးနေတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မတို့က နောက်တစ်နာရီလောက်ကြတော့ ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်မတို့နေတဲ့ အိမ်ရာဝင်းထဲကို ၀င်ဖို့ဆိုရင် ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက်လေးကို ဖြတ်ပြီးမှ သွားရတယ်။ ဆင်ခြေဖုံး ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ လမ်းဘေးဈေးရောင်းသူတွေ၊ ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုး ဈေးသည်တွေ၊ ပစ္စည်းအဟောင်းဆိုင်တွေ၊ အင်္ကျီအဟောင်းဆိုင်တွေနဲ့ သူဘာသာသူ စည်းကားနေတဲ့ ရပ်ကွက်ကလေးပေါ့။
တစ်ခါတလေဆို ဈေးသည်အချင်းချင်း အော်ဟစ်ရန်ဖြစ်သံတွေ၊ မအေနှမ ဆဲဆိုသံတွေလည်း ကြားရတတ်တယ်။ ကိုကတော့ ကျွန်မကို လိုက်ပို့တိုင်း -
“ခိုင်ရယ်….ဒီနေရာကြီးက စိတ်ပျက်စရာကြီးကွာ” လို့ အမြဲတမ်းညည်းညူတယ်။ ကျွန်မကတော့ မြင်နေကျ မြင်ကွင်းမို့ ရိုးနေတာပေါ့။ ကျွန်မတို့လည်း လူတွေရှုပ်နေတာဆိုတော့ ကားကို ဖြည်းဖြည်းပဲ မောင်းသွားရင်း အထည်ဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှေ့ ရောက်လာတယ်။ အင်္ကျီတွေကို ကြိုက်တာယူ၊ တစ်ထည်နှစ်ထောင်ဆိုပြီး အောဟစ်ရောင်းနေတယ်။ လူတွေကလည်း ၀ယ်နေကြတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မက …
“ကို…ဟိုမှာ ကြည့်စမ်း၊ အင်္ကျီတွေက တစ်ထည်မှာ နှစ်ထောင်တဲ့။ ဈေးပေါလိုက်တာနော်”
“ပေါမှာပေါ့၊ အဲဒါ မြန်မာဖြစ် အင်္ကျီအပေါစားတွေပဲ။ အသစ်တောင် မဟုတ်ဘူး။ အဟောင်းတွေ”
“မဟုတ်ပါဘူး ကိုရဲ့ …. ဟိုမှာချိတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီလေးတွေဆို အကောင်းစားလေးတွေလည်း ပါပါတယ်။ အင်း…ကို့ Burberry နဲ့တော့ အဆတစ်ရာလောက် ကွာတယ်နော်”
“ဟာ ခိုင်ကလည်း ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေမှန်းမသိဘူး။ သူတို့ကိုလည်း ကို့အင်္ကျီလိုမျိုး တစ်ယောက်ယောက်က အလကားပေးကြည့်ပါလား။ ၀မ်းသာလွန်းလို့ အင်္ကျီလေးကြည့်ပြီး တသသဖြစ်နေကြမှာပဲ။ မတတ်နိုင်တော့လည်း နှစ်ထောင်တန်ပဲ ၀ယ်ရတာပေါ့”
ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း “အင်း ဟုတ်မှာပါလေ၊ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အင်္ကျီဆို အားလုံးဝတ်ချင်ကြမှာပဲပေါ့” လို့ တွေးလိုက်မိတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်လလောက်ကြာတော့ ကျွန်မတော့ မိဘချင်း နားဖောက်ကြပြီး လက်ထပ်ပေးဖို့ ရက်သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ ကိုကတော့ သူ့မင်္ဂလာပွဲကို အခမ်းအနားဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ တက်ကြွနေတာပေါ့။ ကျွန်မအတွက် သတို့သမီးဝတ်စုံဝယ်ဖို့ ဆိုပြီး Forever Weeding Dress ဆိုင်ကို သွားပြီးရွေးကြတယ်။
ကိုက တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အင်္ကျီကိုရွေးတော့ ဈေးက ဆယ်သိန်းတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ၀တ်စုံလေးက ကျွန်မစိတ်ထဲ သိပ်မလှဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ ကျွန်မကြိုက်တာက သုံးသိန်းပဲတန်တဲ့ ငွေမင်ရောင်ဝတ်စုံလေး။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ထုံးစံအတိုင်း စကားများကြပြန်တာပေါ့။ ကိုက တစ်သက်မှာ တစ်ခါလုပ်ရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲတောင် ခိုင်က တန်ဖိုးမထားဘူး။ ဘာညာနဲ့ ကျွန်မကို စိတ်ခုသွားတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မေမေဆို ကျွန်မကို ဆူလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။
“ညည်းက အရာရာကို တန်ဖိုးမရှိအောင် လုပ်ပစ်ချင်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း တန်ဖိုးရှိအောင် မဆင်သလို ကိုယ့်ဘ၀ကိုပါ တန်ဖိုးမဲ့အောင် လုပ်တယ်”
အို အများကြီးပါပဲ။ ကျွန်မလည်း စိတ်ညစ်သွားမိတယ်။
အဲဒီ တန်ဖိုးဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဘ၀မှာ တော်တော်အရေးကြီးသလားလို့ ကျွန်မစဉ်းစားနေမိတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ နောက် ၃ ရက်လောက် ကြာတော့ ကိုက စိတ်ဆိုးပြေသွားပြီထင်တယ်။ ကျွန်မဆီကို ညနေစောင်းလောက် ရောက်လာတယ်။ အဲဒီနေ့က မိုးကလည်း မနက်ကတည်းက တိတ်လိုက်၊ ရွာလိုက်နဲ့ပေါ့။ ကျွန်မကို အပြင်သွားဖို့ခေါ်တော့ ကျွန်မလည်း လိုက်လာခဲ့တယ်။ မိုးဖွဲဖွဲလေးရွာနေတော့ အဝေးကြီး မသွားတော့ဘဲ ဒီရပ်ကွက်လေးရဲ့ အစွန်ဆုံးမှာရှိပြီး ချောင်းကို ဖြတ်ထိုးထားတဲ့ တံတားကြီးပေါ်ကိုပဲ ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
မိုးဖွဲဖွဲလေး ရွာနေတာမို့ ကျွန်မတို့က ကားထဲမှာပဲ ထိုင်နေကြတယ်။ နောက်တော့ မိုးက ၀ုန်းခနဲ သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာချလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ မိုးက စဲသွားပြန်တယ်။
ကျွန်မတို့လည်း မိုးစဲသွားပြီဆိုတော့ ကားထဲက ထွက်ပြီး ကားဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေလိုက်တယ်။ ကို့ပခုံးလေးကို မှီလိုက်တော့ HUGO ရေမွှေးနံ့လေးက သင်နေလို့ပေါ့။ ပြီးတော့ Burberry ဂျာကင်အညိုရောင်လေး ၀တ်ထားတဲ့ ကို့ပုံစံလေးက ရှင်းသန့်နေတာပဲ။ တစ်ချက်တစ်ချက် မိုးငွေ့ပါတဲ့ လေက တိုက်နေသေးတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မက နည်းနည်းအေးလာတာမို့ ကို့ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်လိုက်တယ်။ ကိုကလည်း အလိုက်သင့် ပြန်ဖတ်ထားတယ်။
မိုးရွာပြီးစဆိုတော့ ချောင်းရေတွေက နောက်ကျိပြီး စီးဆင်းနေတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း စီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်းရေတွေကို ဘာရယ်မဟုတ် ငေးကြည့်နေမိကြတယ်လေ။ အခုမှ စိတ်ဆိုးပြေစဆိုတော့ ဘာစကား စပြောရမှန်းမသိဘဲ ငြိမ်နေတာလည်း ပါတာပေါ့။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မတို့အနားကနေ လူတစ်ယောက်က ၈ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး ဖြတ်လျှောက်သွားတယ်။ အဲဒီလူက ချိုင်းပြတ်စွပ်ကျယ်အင်္ကျီဝါကြန့်ကြန့်နဲ့ ပုဆိုးအနားစုတ်တစ်ထည်ကို ၀တ်ထားတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း မိုးရေတွေနဲ့ ရွှဲနစ်နေတာပဲ။ သူ့ပခုံးပေါ်မှာလည်း ပီနံအိတ်ကို အပေါက်ဖောက်ပြီး ကြိုးနဲ့ လွယ်ထားတယ်။ လက်ထဲမှာလည်း တုတ်ရှည်ရှည်တစ်ချောင်း ကိုင်ထားသေးတယ်။
ကလေးလေးကတော့ ခမောက်ကြီးကို ဆောင်းထားပြီး မတော်တရော် လူကြီး ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည် ဖိုသီဖက်သီကြီးနဲ့ပေါ့။ ကျွန်မတို့နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ အမှိုက်ပုံကြီးတစ်ပုံရှိနေတယ်။ အဲဒီလူနဲ့ ကလေးလေးက အမှိုက်ပုံကြီးဆီကို တရွေ့ရွေ့လျှောက်သွားနေတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
အဲဒီလူက အမှိုက်ပုံကြီးဆီရောက်တော့ သူ့လက်ထဲက တုတ်နဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးထဲက ရောင်းလို့ရသမျှ ဘိလပ်ရည်ဘူး၊ ရေသန့်ဘူး၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်အဟောင်းတွေနဲ့ တိုလီမိုလီလေးတွေကို သူ့ပခုံးဆီက အိတ်ထဲကို ကောက်ထည့်နေတယ်။
ကလေးလေးကလည်း နို့ဆီဘူးခွံတွေကို ကောက်ပြီးတော့ သူ့အဖေရဲ့ အိတ်ထဲကို ပစ် ပစ်ထည့်သေးတယ်။ အဲဒီလူကို အဝေးကနေ မြင်နေရတာတောင် တော်တော်ချမ်းနေပုံရတယ်။ လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေက တုန်နေသလိုပဲ။ သူ့ဆံပင်တွေဆီက ရေစက်တွေက တပေါက်ပေါက်ကျနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ကလေးလေးက သူဝတ်ထားတဲ့ အပေါ် အင်္ကျီကို ချွတ်ပြီး အဲဒီလူကို ပေးနေတယ်။ အဲဒီလူက မယူဘဲ ကလေးကိုပဲ ၀တ်ထားဖို့ ပြန်ပြောနေပုံရတယ်။
နောက်တော့ သူတို့က လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကောက်လို့ ကုန်ပြီထင်တယ်။ သူတို့လာရာလမ်းဘက်ကို ပြန်လျှောက်လာတယ်။
ကျွန်မတို့ရှေ့နားကို ရောက်လာတော့ ကလေးလေးက
“ဖေကြီး…ချမ်းနေပြီမဟုတ်လား။ အင်္ကျီကိုပြန်ယူလေ”
“နေပါသားရယ်၊ သားပဲ ၀တ်ထားပါ”
အဖေဖြစ်တဲ့သူက မေးရိုက်သံကြီးနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးစိုရွှဲနေတော့ အင်္ကျီနဲ့ပုဆိုးက အသားကို ကပ်နေပြီး ပိုအေးရှာမှာပေါ့။ ကျွန်မ သနားသွားမိတယ်။ ကလေးလေးက -
“ဒါဆိုလည်း အိမ်ပြန်တော့မယ်လေ ဖေကြီးရဲ့”
“နေပါဦးကွာ၊ ဒီနေ့အဖို့ နေ့တွက်မကိုက်သေးဘူး။ ဟိုဘက်လမ်းက အမှိုက်ပုံကို သွားမွှေရဦးမယ်”
ကျွန်မက သူတို့ဖြတ်လျှောက်သွားတော့ သူတို့ခြေထောက်တွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဖိနပ်မပါတဲ့ ခြေထောက်တွေက ရေနူးပြီး ပြားနှမ်းနှမ်းဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မနဲ့ ကိုလည်း သူတို့ပြောတာတွေကို နားထောင်ပြီး တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်မိတယ်။ ကို့ မျက်နှာက တစ်ခုခုဆုံးဖြတ်လိုက်သလို ပြတ်သားမှုတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကိုက ချက်ချင်းပဲ သူ့အပေါ်က ၀တ်ထားတဲ့ Burberry ဂျာကင် အညိုရောင်လေးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စောစောက သားအဖနှစ်ယောက်နောက် ပြေးလိုက်သွားပြီး
“ဦးလေး …ရော့ ဒီအင်္ကျီဝတ်ထားလိုက်”
လက်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ လှမ်းယူလိုက်တယ်။
ချမ်းလို့တုန်ခိုက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းပြာပြာနဲ့ -
အဲဒီလို ပြောပြီး အင်္ကျီကို ချက်ချင်းပဲ ၀တ်လိုက်တယ်။
ကျွန်မတို့လည်း ဂျာကင်လေးဝတ်ပြီး တရွေ့ရွေ့နဲ့ ဝေးသွားတဲ့ အဲဒီသားအဖကို ငေးကြည့်နေရင်း စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်ပီတိတစ်မျိုး ခံစားသွားတယ်။ ကိုက -
“ခိုင်ရေ….ဟိုလူတော့ တော်တော်ပျော်သွားမှာပဲနော်။ သူ့တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ ပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်တဲ့ သိန်းကျော်တန် အင်္ကျီကို မမျှော်လင့်ဘဲ ၀တ်လိုက်ရလို့လေ။ သေချာတယ်၊ သူဒီအင်္ကျီကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေတော့မှာပဲ”
“ဟုတ်တယ်နော် ကို။ သူ့တစ်သက် အိပ်မက်တောင် မက်ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး သိလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကို ကုသိုလ်ရတာပေါ့”
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်ပြီး ပြုံးလိုက်မိကြတယ်။
နောက်တစ်ပတ်ကြာတော့ ကို သဘောကျမင်္ဂလာဝတ်စုံကြီးကို အပ်ပြီး ကျွန်မတို့ အိမ်ပြန်လာကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မတို့က ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်လေးကို ဖြတ်ပြီး ကားမောင်းဝင်လာကြတာပေါ့။ လမ်းမှာလည်း ဈေးသည်တွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခက်နေတာပဲ။
အ၀တ်ဟောင်းတွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာလည်း တစ်ထည်မှ နှစ်ထောင်ဆိုတော့ လူတွေက တိုးဝှေနေကြတယ်။ ကျွန်မလည်း ဘာရယ်မဟုတ် လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်မအကြည့်ထဲကို အဟောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ယောက်ျားဝတ်အင်္ကျီတစ်ထည် တိုးဝင်လာတယ်။
ကျွန်မ အံ့သြပြိး သေချာအောင် ကြည့်နေမိတယ်။ “ကျွိ” ခနဲ ကားဘရိတ်အုပ်သံနဲ့ တစ်ဆက်တည်း ကိုဆီမှ
“ဟာ….ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာ။ ကားလာနေတာကို မမြင်ဘူးလား။ အကုန်တိုက်ကုန်တော့မှာပဲ”
ဆိုပြီး စိတ်တိုသွားတဲ့အသံ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မက အဲဒါကို ဂရုမစိုက်အားဘဲ
“ကို … ကားခဏရပ်ပေးပါ”
“ဟင်… ဘာဝယ်မလို့လဲ ခိုင်ရဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ”
ကိုက ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကားကို လမ်းဘေးမှာ ရပ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မက အဟောင်းဆိုင်လေးဆီ လက်ညှိုးထိုးပြရင်း -
“ကို… ဟိုမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဂျာကင်လေးက တို့ဂျာကင်လေးမဟုတ်လား”
ကိုက ကြည့်လိုက်ပြီး ဟင်ခနဲ အံ့သြသွားတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကို့ ဂျာကင်လေးပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က အမှိုက်ကောက်တဲ့ သားအဖကို ပေးလိုက်တဲ့ Burberry တံဆိပ် ဂျာကင်အညိုရောင်လေး။
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ပြိုင်တူ ကားပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအဟောင်းဆိုင်ထဲကို ၀င်လာလိုက်ပြီး ကျွန်မက ဂျာကင်လေးကို လက်ညှိုးထိုးပြရင်း -
“အဲဒီ ဂျာကင်လေးက ဘယ်လောက်လဲဟင်”
မျှော်လင့်မထားတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုမို့ ကို့ဆီမှ အံ့သြတကြီးမေးသံ ထွက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ဆိုင်ရှင်က
“ဘာလဲ၊ သုံးထောင်များလို့လား၊ အစ်ကိုတို့လိုချင်ရင် နှစ်ထောင့်ငါးရာ ယူဗျာ”
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဘာမှမပြောမိကြတော့ဘဲ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ဆိုင်ထဲမှ လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ဆင်ခြေဖုံးဆင်းရဲသားရပ်ကွက်လေးတစ်ခုရဲ့ အဟောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ Burberry တံဆိပ်အစစ် နှစ်ထောင်ငါးရာကျပ်သာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အညိုရောင် ဂျာကင်လေးက လေမှာ တလွင့်လွင့်နဲ့ပေါ့။ ကားပေါ်ရောက်တော့ ကိုက -
“တောက်…. တော်တော်ဆိုးတဲ့ လူကွာ။ ကိုယ်ကတော့ စေတနာနဲ့ ၀တ်ပါစေတော့လို့ ပေးလိုက်တယ်။ သူက ပစ္စည်းအကောင်းကို ကောင်းမှန်း၊ ဆိုးမှန်းမသိဘဲ သိန်းကျော်တန် အင်္ကျီကြီးကို နှစ်ထောင်လောက်နဲ့ အဟောင်းဆိုင်မှာ ရောင်းပစ်ရတယ်လို့ကွာ။ တွေးရင်း တွေးရင်း ဒေါသဖြစ်တယ်။ ဒီလူက သူရတဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ တန်ဖိုးကို နားမှလည်ရဲ့လားမသိဘူး”
ကျွန်မက ကို ပြောတာကို ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ တစ်စုံတစ်ရာကို နားလည်စွာ ပြုံးရုံပြုံးနေလိုက်တယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲကတော့
“ကိုရယ်…. တကယ်တော့ တန်ဖိုးဆိုတာ လိုအပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ လူပေါ်မှာ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲနေတတ်တာမျိုးပါ။ သိန်းကျော်တန် အင်္ကျီတစ်ထည်ရဲ့ တန်ဖိုးကို နားမလည်ပေမဲ့ အင်္ကျီကို ရောင်းလို့ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံနှစ်ထောင်နဲ့ သူ့မိသားစုရဲ့ ထမင်းတစ်နပ်တန်ဖိုးကိုတော့ သူက သိပ်ကိုနားလည်တာပေါ့”
တကယ်တော့ တန်ဖိုးဆိုတာ ကိုယ့်မှာ ပစ္စည်းဘယ်လောက်များများ ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က လူဘယ်နှစ်ယောက်ကို ထမင်းကျွေးထားနိုင်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။
ဇီဝကမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၂
ထုတ်နုတ်ခြင်း - မြန်မာဝတ္ထုတိုများ (၂၀၁၂)၊ စိတ်ကူးချိုချို
စာရိုက် - Thitsar Linn Htein
(မှတ်ချက်။ ။စာလုံးအကျအနများရှိခဲ့ပါက စာရိုက်သူရဲ့ လိုအပ်ချပ်သာဖြစ်ပါသည်။)
Posted by Alex Aung at 12:25 PM